म आफ्नो जीवनको कुनैपनि पलमा कोरियालाई सम्झंदिनः निर्मल उपाध्याय
Warning: getimagesize(article_uploaded_files/1183apuru_camara.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
६ महिना अघि EPS मार्फत थुप्रै आशा र लक्ष्यहरु बोकी कोरिया प्रवेश गरेका भक्तपुर सिपाडोल २ निवासी निर्मल उपाध्यायलाई के थाहा उनले यो अठोट गर्नुपर्ला भनेर ।
कोरिया आउनु अघि Computer, Communication Equipment Television उनको कन्ट्रयाक्ट भएको थियो । तर कम्पनी प्रवेश भएको पहिलो दिन मै उनले गर्नुपर्ने काम देखेर झसङ्ग भए । तर काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो उनीमा । त्यसैले उईजम्बु स्थित दोङ्जीन् कोथिन कम्पनीमा मनले नचाहे पनि काम शुरु गरे । कम्पनीमा उनको काम PVC लाई तातोपानीमा पोल्नु पर्ने थियो । त्यसरी पोल्दा निस्कने धुँवाका कारण उनको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न थाल्यो र उनको हत्केलामा फोकाहरु निस्के । यसको असरबाट उनको स्वास्थ्य खराब भयो र अस्पताल धाउन शुरु भयो । कम्पनीको सोही कामले गर्दा उनको स्वास्थ्य खराब भएपछि उनले सो कम्पनीमा काम गर्न नसक्ने भएको र त्यस कम्पनीका मालिकलाई पटक पटक कम्पनी परिवर्तन गर्नको लागि आग्रह गर्दा सिधै नेपाल पठाइदिने धम्की पाए । EPS मार्फत आएका कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न साहुले स्वीकृति पत्र दिनुपर्ने नियम छ । तर उनको सो आग्रहमा त्यस मालिकले उनलाई कम्पनी परिवर्तनको स्वीकृति होइन सिधै नेपाल फर्काउने स्वीकृति दिने जवाफ पाए उनले । तर उनको मन कम्पनीको काममा भन्दा उनको स्वास्थ्यमा रहेको थियो । उनी भन्छन् "आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा पैसा ठुलो हैन । म आफ्नो स्वास्थ्यलाई खराबी हुने कुनै काम गर्दिन" ।
एक दिन कम्पनी मालिकको स्वीकृति पाई उनी अस्पताल गए । सोही दिन अन्य नेपाली कामदारहरुलाई तिमीहरुको तलब ७ तारिख पाउने हो भनी एउटा कागजमा सही गराए । बिचरा ती नेपाली कामदारहरुलाई थाहा थिएन त्यो पत्र निर्मल उपाध्याय कम्पनी छाडेर भागेको हो भन्ने स्वीकृति पत्र हो भनेर । अस्पतालबाट फर्केर उनले ती मालिकबाट तँ अवैधानिक भइस् अब तँ नेपाल फर्कनु पर्छ भनेपछि नेपाली दाजुभाइहरुलाई सोधेपछि मात्र उनीहरुले थाहा पाए त्यो कागजमा त्यसरी लेखिएको रहेछ भनी ।
बिचरा निर्मल अब के गर्ने ? कुनै बाटो देखेन उनले । साथीहरुको सुझाव पाएर उनी नोदोङ्बु अर्थात कोरियन श्रम मन्त्रालयको कार्यालयमा आफ्नो हातमा निस्केका फोकाहरुको तस्वीरका साथ उजुरी दिन पुगे । तर नोदोङ्बुले श्रम सम्झौता अनुसार कम्पनीको मालिकलाई पहिलो मान्यता दिइन्छ । तर नोदोङ्बुबाट काम गर्न मन लागे फेरि त्यही कम्पनीमा जाउ भन्ने सुझाब पाए । होइन मेरा साथीहरुलाई झुक्याएर सही गराइयो भन्दापनि उनको कुनै सुनुवाई भएन त्यहाँबाट । अब उनको साहारा भनेकै नेपाली राजदूतावास हो भनी सम्झी राजदूतावासमा फोन मार्फत सम्पर्क गरे । तर दूतावासले यस बिषयमा हेर्न नमिल्ने जवाफ पाएपछि उनी झन् बेसाहारा नै बने ।
साथीहरुकै सल्लाह अनुसार यसमा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको र पुन आफु बैधानिक हुनुपर्ने माग राखी प्रवासी मजदुर सेवा केन्द्रमा उजुरी दिन पुगे । तर त्यहाँबाट उनले आफ्नो मुद्दामा हार पाए । उनको कार्डमा आउंदो सेप्टेम्बर ७ सम्म भिसा छ तरपनि यतिन्जेलसम्म उनी लगभग डेढ महिना अबैधानिक भैसकेका थिए । यसरी नै नेपाल फर्कन त भएन त्यसैले उनी बैधानिक हुन साढे सात लाख वन् जरिवाना तिरी इमिग्रेशन अफिस गई बैधानिक हुनका लागि आवेदन दिए । काम गर्ने भिसाबाट कोरिया प्रवेश गरेका उनले पुन सोही भिसा पाउने त कुरै भएन त्यसैले उपचार गर्ने भिसा पाए अर्थात् G-1-D.
अब उनीसंग एउटै बिकल्प छ नेपाल फर्कने । कति आशा र सपनाहरु बोकी कोरिया आएका थिए उनी । भर्खर २३ बर्ष पुगेका निर्मल भन्छन् "कोरिया बारे नेपालमा जे जति बखानहरु छन् ती सब बकवाश हुन् । नेपालमा जे जति कोरियाका बारेमा राम्रा कुराहरु सुनेको थिएँ तर यहाँ अति नै फरक पाएँ" । यहाँका कम्पनी मालिकहरु निक्कै घटिया हुने उनको जिकिर छ किनकि उनलाई त्यही मालिकले भनेका थिए रे "मैले गर्दा तँ कोरिया आउन पाइस्" ती मालिकलाई नेपालीहरु कोरिया आउनु भनेको स्वर्गमा पुग्नु जस्तै हो र यहाँ आएपछि कामै नगरी पैसा कमाउन सकिने लागेको होला । त्यो वाक्याँशले नै थाहा पाउन सकिन्छ ती मालिकको स्तर कति छ भनेर । दिनरात कम्पनीको काममा मात्रै ध्यान जाने बाहिर के भएको छ भन्ने कुनै कुरा थाहा नहुने ती कम्पनी मालिक भनाउंदाहरुको दिमागै त्यस्तो भएपछि कसको के लाग्छ र ?
यहि मार्च ५ तारिख फर्कन तयार भएका निर्मलको अबको योजनाबारे सोध्दा उनी भन्छन् "कम्पनीमा भोगेका दुःखहरु सम्झी अब नेपाल मै केही गर्ने योजना छ । मातृभूमि मै केही गर्छु । कोरिया भनेको देश यस्तो हुंदो रहेछ भनेर थाहा थिएन । कोरियामा आउन लागेका साथीभाइलाई कोरियाको बास्तविकता सुनाउंछु । ताकि म जस्तो अरु कोही नहोस् । मैले भोगेका दुःखहरु अरुले भोग्न नपरोस् । अब कोरिया भन्ने देशलाई छड्के नजरले समेत हेर्ने छैन जीवनको कुनै पलमा कोरियालाई सम्झने छैन ।"